သောသီခို: အစိုးရစစ်တပ်၏ ရိက္ခာပစ္စည်းများစွာကို ကေအဲန်ယူ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့
zin mar said...
Don't allow BURMESE ARMY to enter ur region, they r ur enemies. Oneday they will fight u
If the government is sincere about the ceasefire, they must not upgrade their posts and should not increase their activities in KNU control area. Instead, they should reduce the military in the areas.
moo SKY said...
i like that i mu traw people dont enter your region
ကောင်းတယ် ကျော ဘောကျော်ရေ..ဖြတ်စီးပစ်..ဒီကောင်တွေကုလားမူတူး
တို့ အဖွဲ့ ကိုပဲလိမ်ရင်လိမ်ပစေ..တစ်ကယ်တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့လူတွေကို
လာမလိမ်မိစေနဲ့ ဖြတ်စီးပတ်တာက သိမ်းလိုက်တာထက်ပိုကောင်းပါတယ်.
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သိမ်းလိုက်ရင် အရင် က တပ်မဟာ ၃ ဒုံဆိပ်ကွင်းဆိပ်ကို
၀င်တိုက်ပြီးရခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲရမ်းတွေလို ဗိုလ်မြကရန်သူပိုပြန်အပ်ခိုင်းခဲ့သလို မူတူးကခင်ဗျားတို့ ကိုရန်သူကိုပြန်အပ်ခိုင်းဖို့ ခိုင်းနေဥှီးမည်.
klo htoo said...
good news!!! Thanks brigade(5).